Fiarahamonina ho an’ireo Mitondra Otrikaretina SIDA · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Mey 2017 4:56 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Français, বাংলা, srpski, 简体中文, 繁體中文, Español, Italiano, English
Nampangain'ireo vondrona isankarazany mpiaro zon'olombelona ny governemanta Kambodziana ho nametraka tsy araka ny sitrapony fiarahamonina iray ho an'ireo mitondra otrikaretina SIDA rehefa nametraka fianakaviana 40 miaina miaraka amin'ny otrikaretina VIH sy SIDA ho any amin'ny vohitra iray 25 kilaometatra miala ny tanànan'i Phnom Penh.
Avy ao Borei Keila ao Phnom Penh ireo fianakaviana ireo. Nendahana avy amin'ny tranony izy ireo hahafahana manatanteraka ny drafitra fanitàrana tanàndehibe ataon'ny governemanta. Ankehitriny dia ao amin'ny Vohitr'i Tuol Sambo ireo fianakaviana ireo no monina.
Mitaraina noho ny fepetra iainan-dry zareo ao amin'ilay “vohitry ny SIDA” ireo fianakaviana:
Tsy misy rafi-pidiovana ara-dalàna, tsy misy rano, tsy toerana masina mahasalama ho an'ireo mitondra otrikaretina VIH ilay faritra, izay mila fanarahana maso sy fikarakaràna manokana.
Lazain'ireo olona mitondra otrikaretina VIH monina ao amin'ilay vohitra fa tsy nahazo fankatoavana ofisialy avy amin'ireo manampahefana izy ireo momba ny zony, na tamby fanonerana avy amin'ny governemanta tamin'ireo tranon-dry zareo fahiny.
Tian'ny Details are Sketchy ny hahita izay manampahefana tomponandraikitra amin'ity hetsika hentitra be ity:
Iza no tomponandraikitra amin'ity fanapahankevitra ity? Tokony hikaroka ny haino aman-jery. Ary tokony hanomana fanenjehana ireo mpampanoa lalàna. Satria azo antoka fa raha kely indrindra dia iray amin'ireo 40 mitondra otrikaretina no ho faty vokatr'ity hetsika ity. Farafaharatsiny, dia vono olona noho ny tsy fitandremana io rehefa tsy vono olona efa niomanana tsotra izao.
Ny Tambajotra Manerantanin'ireo Olona mitondra otrikaretina VIH dia manainga ny governemanta Kambodziana hijery ny olana amin'ny maha-olombelona momba ireo fianakaviana nesorina tamin'ny toerana nisy azy ireo:
* Atsaharo ny fanisahana ireo fianakaviana mitondra otrikaretina VIH ho any amin'ny faritr'i Tuol Sambo ;
* Hatsarao ireo fepetra iainana ao Tuol Sambo mba hisy ny farafahakeliny amin'ny fenitry ny maha-toerana fialokalofana azy, ny resaka fidiovana, ary ny rano madio;
* Ataovy azo antoka ny fahafahana mahazo fikarakarana ara-pitsaboana tsara kalitao, tafiditra amin'izany ny fikarakarana ny aretina vih, ny fikarakarana ireo aretina mpanararaotra, ny fikarakarana ara-pahasalamana fototra sy fitsidihana any an-tokantrano;
* Miasà miaraka amin'ireo masoivoho mahefa ary makà hevitra amin'ireo fianakaviana efa any Tuol Sambo mba hiatrehana avy hatrany sy amin'ny fomba maharitra ireo olana momba ny fanomezana trano hipetrahana, ny fahasalamana, ny aro aina, ary ny fanomezana asa, sy fampidirana azy ireny hiverina amin'ny fiarahmonina amin'ny alàlan'ny fiarovana ny zon'izy ireny sy ny fivelomany; ary
* Mampiasà dingana fifantenana amin'ny fomba mangarahara sy tsy mitanila mba hamaritana ny hoe iza no manana zo hahazo ny trano ao Borei Keila, ary avelao ireo fianakaviana voafantina hifindra avy hatrany any an-toerana. Ho an'ireo tsy voafantina, tokony homen'ireo manampahefana trano hafa sahaza.
Raha nanoratra ho an'ny Global Health, hoy i Alanna Shaikh :
Ho ahy, toy ny ohatra efa mahazatra izy ity amin'ny fikarakarana ireo olona mitondra otrikaretina SIDA ho toy ny olona fanàry. Tsy maintsy ho faty ihany izy ireo, ka araka io lojika io, tsy msy antony hikarakaràna tsara azy ireny. Nefa ny olona mitondra otrikaretina SIDA dia mbola olombelona ihany, manana zo sy traikefa ary fahaizamanao hiainana fiainana feno. Tsy tombontsoan'iza na iza ny fitondràna azy ireny ho toy ny tsinontsinona.
Maherin'ny 100 ireo fikambanana iraisampirenena sy ao an-toerana no nanoratra ho an'ny Praiminisitra, Hun Sen sy ny Minisitry ny Fahasalamana, Mam Bunheng, nangataka tamin'ity farany hanome fikarakarana mendrika ho an'ireo fianakaviana nafindra toerana:
Tsy sahaza velively ny fepetra fanomezana trano fonenana ireo ao Tuol Sambo raha resaka refy, fiarovana amain'ny afo, ary fidiovana no resahana. Mivangongo anaty trano heva ireo mponina ao, trano zara raha voatsinjarazaran'ny fanitso izay manendy rehefa mafàna ny andro . Tsy misy lakozia ary tsy misy rano mandeha any anatin'ireo trano heva, izay mifanila amin'ireo fantsona fanariana rano maloto, ary lavadrano tokana no iraisan'ireo fianakaviana voahilika ireo.
Raha toa ireo olona tsy nanana hialofana tao Phnom Penh ka napetraka anaty trano biriky ao amin'ny faritra iray mifanila amin'ny Tuol Sambo, ireo fianakaviana mitondra otrikaretina SIDA avy any Borei Keila kosa napetraka aminà faritra nozarazaraina, ambany lavitra noho izay trano fonenana, avahan'ireo rindrina sy tafo fanitso maitso mivalombalona. Na talohan'ny nametrahana ireo olona nesorina tany amin'ny toerana nisy azy ireo aza, efa notondroin'ireo mponina tao an-toerana ho “vohitry ny SIDA” ireo trano heva maitso.
Tena mametraka olana goavana ho an'ny fahasalamana ny fepetra iainana ao Tuol Sambo, indrindra fa ho an'ireo olona izay efa tandindonin-doza ny ainy noho ny fitondràna otrikaretina SIDA. Taterin'ireo mponina ao fa ny hafanàna any anatin'ireo trano heva izay zara raha misy rivotra mivezivezy dia tena henjana be, ka amin'ny ankapobeny dia tsy mahajanona ao an'efitranony izy ireo mandritry ny tolakandro no sady matahotra sao ho simban'ny hafanana ny fanafody ARV ao amin-dry zareo.
Tsy hoe tsara manao ahoana toy ny asehon'ity lahatsarin'i Licadho, nakariny ao amin'ny The Hub ity akory ny fepetra iainan'ireo fianakaviana nesorina tamin'ny tranony fahiny tao Borei Keila :